Semalt Uyazi indlela yokwenza ii-Injini zophando zithande indawo yakho
Kukhuselekile ukuthetha ukuba amagama angundoqo kufuneka ukuba yinxalenye yewebhusayithi yomxholo, ngoko bahlala befuna ingqwalasela engavamile. Ngamanye amagama, ungatsho ukuba ukusebenzisa amagama angundoqo amagama kubalulekile ekusindeni kwesiza sakho. Ngaphandle koko, luhlobo lwezakhono ezifuna ixesha elininzi. Ngokomzekelo, ukuba uthengisa i-orchids, kufuneka ucinge ngamagama afanelekileyo kwaye uwafake kumaqaku akho rhoqo - wine tours huacachina peruvian. Kuya kuba mnandi xa usebenzisa amagama angundoqo kumhlathi wesibili, ngaphandle kokuphazamisa ukubukeka kwinqaku. Ngamafutshane, kufuneka uqinisekise ukuba umxholo ufundwa ngokwemvelo kwaye ubhalwe ngaphandle kweyiphi na impazamo yegrammatical okanye ipelo.
Igor Gamanenko, u-10 (Semalt oyingcali, uthi ungayithanda okanye ayikho, kodwa amagama angundoqo ayingxenye ebalulekileyo nayiphi na iwebhusayithi. Zisetyenziselwa ukujolisa inani elikhulu labantu kwaye kukunceda uhlakulele ukuqonda ukuba uluphi uhlobo lwamagama okanye amagama abaphulaphuli bakho abawufunayo. Ezinye iingcali ze-SEO zibhekiselele kwiindlela ezingekho mthethweni nezingafanelekanga ezifana negama eliphambili lokugxila ukubeka amanqaku kwiisayithi zabaxhasi babo. Ukugxilwa kwegama elingundoqo kunokuchazwa njengamaphepha amanqaku amaninzi okanye amatha tags kumaphepha ewebhu ngamagama amaninzi, amabinzana kunye namazwi afanelekileyo.
Ngokomzekelo, ukuba ubhale iimetekethi zeemeta okanye i-meta inkcazelo engafanelekanga kwaye ufuna ukusebenzisa igama elingundoqo, ngokuphindaphindiweyo, akunakukunika iziphumo ezifunwayo. Uhlala ulungile, kwaye ufanele ugxininise kumxholo wekhwalithi. Sebenzisa amagama afanelekileyo kwisifundo se-site yakho, umzekelo: ungasebenzisa amagama afanelekileyo njengama-orchids, iipopu zeentyatyambo, iintyatyambo, izityalo ezimbiweyo kunye nabanye. Kucaca ukuba akukho lizwi elifanayo okanye ibinzana kufuneka liphindwephindwe kuzo zonke izivakalisi zakho. Kufuneka kube nokuhambelana kunye neengcamango ezithile kwiinqununu zakho zomxholo.
Inkcazo efanelekileyo yeemeta, ngakwelinye icala, yinto ofuna ukuyiqwalasela. Qinisekisa ukuba awusebenzisi ngaphezulu kwegama elilodwa elingundoqo. Khangela imizekelo yeenkcukacha zeemeta zezinye iiwebhusayithi. Zama okusemandleni akho ukuba ufunde kuzo kwaye ubhale iingcaciso zakho zeemeta ngendlela ababukeka bengenasiphako kwaye banegama elilodwa okanye ezimbini.
Ndivumele apha ndikuxelele ukuba ukugxilongwa kwegama elingundoqo elingayi kuze kusebenze ishishini lakho njengoko injini yokukhangela abaqhumbuzi bayakuphonononga indawo yakho kunye nomxholo wayo kumgangatho. Ukuba iwebhusayithi yakho iqulethe amagama angundoqo angaqhelekanga kunye neqondo eliphakamileyo linye igama okanye ibinzana, indawo yayo iya kulahlwa. Kwezinye iimeko, i-Google, iBing, kunye ne-Yahoo inokuthi ihlawulise okanye ichithe indawo yakho yokuphila, kwaye ayikwazi ukukhokha kwakhona.
Yingakho kufuneka uqaphele ngelixa usebenzisa amagama amancinci kwaye ungafaki amagama amaninzi kunye nemibandela ngenxa yeendawo eziphuculweyo. Iziphumo ziya kuhambelana, kwaye awukwazi ukuphumeza iziphumo ezifunwayo. Siphakamisa ukuba ubhale umxholo womgangatho kwaye ugxininise kumacandelo anolwazi ukwenzela ukuba iinjini zokukhangela zizithande indawo yakho.